Frankfurt Airport inoshandisa 87 ichangoburwa biometric-inogonesa TS6 kiosks
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Frankfurt Airport inoshandisa 87 ichangoburwa biometric-inogonesa TS6 kiosks
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Frankfurt Airport inoshandisa 87 ichangoburwa biometric-inogonesa TS6 kiosks.
Frankfurt Airport inoshandisa makumi masere nenomwe eSITA ichangoburwa TS87 Kiosks mhiri kweTerminal 6 uye 1 kuvandudza ruzivo rwevafambi.
SITA's biometric-enabled kiosks nemasevhisi ekutumira mameseji anoshandura Frankfurt Airport.
SITA's TS6 yekutarisa-mukati makiosks inobvumira vafambi kuti vatarise mukati nekukasira uye vatore mabhegi mabhegi epashure ega-bhegi rekudonha masevhisi.
Iwo makiosks anoshanda mukonzati neSITA Flex uye anopa vafambi ruzivo rwakabatana rwemushandisi mundege dzakawanda.
SITA, iyo tekinoroji inopa indasitiri yekufambisa kwemhepo, yakazivisa hukuru hwehunyanzvi hwekutumirwa pa Frankfurt Airport kuwedzera ruzivo rwevatyairi uye kuwedzera kushanda kweairport. Kuendeswa uku kunosanganisira kuiswa kwe87 biometric-enabled SITA TS6 Kiosks uye inotarisirwa kupera kupera kwegore rino.
SITA's TS6 cheki-in kiosks inogoneka inobvumira vafambi kuti vatarise mukati nekukasira uye vatore mabhegi mabhegi epashure ega-bhegi rekudonha masevhisi. Makiosks anoshanda pamwe chete SITA Flex uye ipa vafambi ruzivo rwakabatana rwemushandisi mundege dzakawanda, kuwedzera nyore kwekushandisa uku ichideredzawo kubata kwemuviri.
Vatakuri vanoramba vari mukutonga kwesarudzo dzavo dzekuzvibatsira, kubva pakupinda kusvika pakudonha kwebhegi kuburikidza neiyo intuitive biometric-enabled kiosk. Iyo itsva SITA TS6 kiosk ndiyo yakahwina mubairo we2021 IF Dhizaini yedhizaini, inoenderera, uye inoshanduka, inogona kugadzirwa kuti ikwane nedhizaini yerudzi rweairport uye zvinodiwa nevatengi. Iyo modular dhizaini zvakare inoreva kukwidziridzwa uye kugadziridzwa kunogona kuitwa pasina kutsiva iyo kiosk yese, kuunza yakawedzera mutengo kunyatsoita uye kusimudzira mabhenefiti.
SITA's TS6 Kiosk inogona kushandiswa kutarisa-mukati uye bhegi tagging ichigadzira nzira yekusabatika zvachose, nhare yekufamba rwendo. Kuendeswa kuFrankfurt Airport kunomiririra kuita kukuru kweSITA muEurope.
Dr. Pierre-Dominique Prümm, Mutungamiriri Mukuru weAviation & Infrastructure pa Fraport, akati: “Kupa vafambi nzira dzakajeka, dzakachengeteka, uye dzine hungwaru dzekufamba tichionawo kuti tine mabasa akatsiga uye anoshanda panhandare yendege kwakakosha sezvo indasitiri yedu ichipora kubva mukukanganiswa nedenda. SITA inotitsigira mukuzadzisa chishuwo ichi, uye tinotarisira kutambira vafambi vakawanda kudzokera kumatenga. "
Sergio Colella, Mutungamiriri weEurope, SITA, akati: "Tinodada nekuenderera mberi nekutsigira nhandare dzendege dzakaita seFrankfurt mukupora kwavo kubva mukukanganisa kwedenda. Tekinoroji inobata makiyi ekuvhura mafambiro akangwara uye akachengeteka kune vese, kudzoreredza mihoro yakarasika mukati memwedzi gumi nemisere yadarika, uye nekuona mashandiro anochinjika anogona kuenderana nemamiriro asingatarisirwe emangwana. Indasitiri yakasimba uye yakagadzikana yekufambisa kwendege ichabatsira vafambi, hupfumi, nemabasa. "